बलात्कारी धरौटीमा छुट्दै, पूर्वराजा शाहले ५ करोड ३० लाख कर तिर्न बाँकी, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । राजधानीबाट विहीवार प्रकाशित पत्र-पत्रिकाले आज विभिन्न शिर्षकमा प्रमुख समाचार छापेका छन् । यसका साथै पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक – फरक विषयका समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् ।
कान्तिपुर - नेपालमा पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहयोग उत्तरी छिमेक चीनबाट भित्रिएको छ । नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने अन्य मुख्य मुलुक अमेरिका र भारतभन्दा चीनको सहयोग बढेको सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डा स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा देखिएको छ । यो अवधिमा चीनबाट करिब १२ अर्बको सहयोग आउँदा अमेरिकाबाट करिब ५ अर्ब हराहारी सहयोग भित्रिएको छ । नेपालले सैन्य सहयोगका रुपमा विभिन्न मुलुकबाट हवाई जहाज, सञ्चारका साधन, बम निष्क्रिय गर्ने साधन, हेभी र लाइट सवारीसाधन, ढुङ्गा, हतियार, विस्फोटक पदार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगत शान्ति स्थापनार्थ चाहिने आर्मोरेट पर्सनल क्यारियर (एपीसी) लगायतका सामान लिन्छ ।
चीन, भारत र अमेरिकाले नेपालमा चासो बढाइरहँदा युरोपेली मुलुक विशेषगरी बेलायतले भने नेपाली सेनालाई पछिल्लो समय सहयोग गरेको देखिँदैन । नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० लाई आधार मानेर १९६५ मा भएको रक्षा सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हतियार वा सैन्य सामग्री ल्याउँदा ऊसँग स्वीकृत लिनुपथ्र्यो । अहिले भारतले नेपाललाई सैन्य सामग्री दिँदा कुल मूल्यको ६० प्रतिशत मात्र अनुदान दिन्छ । बाँकी ४० प्रतिशत नेपालले व्यहोर्नुपर्छ । नेपालले भारतबाट पछिल्ला पाँच वर्षमा सेनालाई नाइटभिजन, हतियार, बारुद र गाडी ल्याएको छ । यसको मूल्य खुलाइएको छैन ।
अन्नपूर्ण - राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय ४ दिन मात्र बाँकी छँदा पनि प्रमुख दलले उम्मेदवार छनोट नगरेको समाचार छ । निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार उम्मेदवार दर्ताको समय तोकेको छ । तर दलले उम्मेदवार छनोटका लागि गृहकार्य समेत गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा रिक्त १८ सदस्यका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ । एक सिट भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछ । आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेदवार दर्ताको पर्खाइ गरिरहे पनि दलहरु भने अझै तातेका छैनन् । अधिकांश स्थानमा चुनाव जित्ने निश्चित देखिएको सत्तासीन नेकपाले प्रदेश २ मा राजपासँग चुनावी तालमेल गरेको छ । प्रदेश २ बाट नेकपा र राजपाले २–२ सिटमा तालमेल गरेका छन् । यी दुई दल मिल्दा चुनाव जित्ने निश्चित छ ।
नयाँ पत्रिका - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दमकस्थित चिया बगानले वर्षौँदेखि कर नतिरेको छ । दमक नगरपालिका– ४ र ९ को पाँच सय ७५ बिघा १७ कट्ठा १४ धुरमा रहेको हिमालय–महालक्ष्मी टी गार्डेनको पाँच करोड ३० लाख कर बक्यौता छ । गणतन्त्र स्थापनापछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अधीनमा रही यो बगानलाई पनि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएको थियो । तर, बगानले हालसम्म कर नतिरेको दमक नगरपालिकाको राजस्व शाखाले जानाएको छ । चिया बगानको व्यवस्थापन हाल सोल्टी ग्रुपले गर्दै आएको छ । हिमालय–महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिले सञ्चालन गरेको चिया बगानभित्र काठका धेरै संरचना छन् । जहाँ पूर्वराजपरिवारले प्रयोग गर्ने गरेको ‘मिनी दरबार’ पनि छ । यो दरबारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र प्रत्येक वर्ष आउने गर्छन् । गत बुधबार पनि उनी बगानमा आएका थिए । हिमालय–महालक्ष्मी टी गर्डेनलाई दमक नगरपालिकाले कर तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेको छ, तर उठाउन सकेको छैन । ‘हामीले पटक–पटक ताकेता गरेका छौँ । धेरैपटक पत्र काटेका छौँ,’ मेयर रोमनाथ ओली भन्छन्, ‘यहाँ ९गार्डेनमा० भएका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा ठूलो रकम छ, हामीले सक्दैनौँ, माथि भन्नुपर्छ भन्छन् । नगरपालिकाले पूर्वराजालाई चिन्दैन । यो त कम्पनीको नाममा छ । हामी कम्पनीलाई मात्रै चिन्छौँ ।’
कान्तिपुर - ‘बलात्कार र बेचबिखन मुद्दामा धरौटी’ मात्रै शीर्षकमा मुख्य समाचार छ । पत्रिकाले सिद्दबाबाको अनुसन्धान र आदेश नै शंकाको घेरामा परेको र युवतीलाई भारतमा लगेर बेच्ने दुई युवक एक/एक लाख धरौटीमा छुटेको विषयबारे विश्लेषणात्मक समाचार बनाएको छ ।
समाचारमा लेखिएअनुसार जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कार मुद्दामा हनुमान मन्दिर आश्रमका सिद्दबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई कानुनी धरातलबेगर धरौटीमा छाडिएको भेटिएको हो । त्यस्तै नेपालगन्जकी एक महिलालाई दिल्लीमा लगेर बेच्ने दुई युवकलाई एक/एक लाख धरौटीमा छाडिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भव्य उद्घाटन भएको विषयलाई शीर्ष समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले नेपालले दशरथ रंगशालाबाट विश्वलाई नेपाल घुम्न निम्तो दिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार चर्चित नायक राजेश हमालले भव्यरुपमा सिंगारिएको दशरथ रंगशालाको मञ्चबाट अंग्रेजीमा ‘वर्ल्ड, आर यु रेडी फर नेपाल’ भन्दै अंग्रेजीमा प्रश्न गर्नुभएको हो । देशका सातै प्रदेश र संघीय राजधानी काठमाडौंबाट एकसाथ थालनी गरिएको नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहले सम्पूर्ण नेपालीको साझा अभियान भएको छनक दिइएको समाचारमा लेखिएको छ ।
यसैगरी कांग्रेस सभापति आन्तरिक विवादका कारण वाक्क हुनुभएको र पाँच महिनामै ७७ अर्बको आयात शीर्षकका समाचार पनि पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमै छापेको छ ।
राजधानी - भ्रमण वर्ष शुरु भएसँगै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ घोषणा गरिएको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ बारे प्रमुख समाचार बनाएको छ । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले दशरथ रंगशालामा उद्घाटन गर्नुभएको पर्यटन वर्ष नेपालले दोश्रो पटक आयोजना गरेको हो । यसअघि सन् १९९८ मा पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यका साथ पहिलोपटक भ्रमण वर्ष आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै सन् २०११ मा दोश्रोपटक १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ पर्यटन वर्षकाे आयोजना भएको थियो । सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार ती वर्षहरुमा लक्षित संख्यामा पर्यटक आएका थिएनन् ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१९ को तथ्यांकलाई केलाउने हो भने यो पटक २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि अझै मेहनत गर्नेपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि वार्षिक रुपमा १२ लाख पर्यटक भने आइरहेका छन् । पत्रिकामा १० वर्षे पर्यटन रणनीतिमा सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने योजना राखिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारीता दखिन नसकेको उल्लेख छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् - नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई स्वागत गरेकी छिन। उनले मंगलबार सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आफ्ना ४ सुन्दर तस्बिर सेयर गर्दै भ्रमण वर्षको सफलताको शुभकामना दिएकी छिन्।
राजदूत यान्छीले ट्वीटमा लेखेकी छिन, 'प्राकृतिक सौन्दर्यले सदैव भित्री मनलाई छुन्छ। विविधता, इतिहास र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सुन्दर नेपाल साच्चिकै घुम्‍न लायक छ।'
उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई मेन्सन गर्दै आफ्ना चारवटा तस्बिर पोस्ट गरेकी छिन्।
True beauty always touches the deep heart. Beautiful Nepal with history, diversity and nature deservesavisit. Wish #VisitNepal2020 successful! @yogesbhattarai
२०२० नेपाल भ्रमाण वर्ष सफलताको शुभकामना !
1:23 PM - Dec 31, 2019
1,043 people are talking about this
Happy New Year! On behalf of the Embassy of China in Nepal, I would like to wish Nepali people good health and luck, wish Nepal harmony and prosperity! #VisitNepal
नयाँ बर्षको शुभकामना!नेपाली जनतालाई सुस्वास्थ्य र खुशियालीको कामना गर्दछु,नेपालको सद्भाव र समृद्धिको कामना गर्दछु!
3:38 PM - Jan 1, 2020
पुरा पढ्नुहाेस्- https://www.kantipath.com
अमेरिकामा कोरोनाका कारण एक नेपालीको मृत्यु
'लेस्बियन' सन्नी ?
एउटै फ्लाइटमा आएका तीन नेपालीलाई कोरोना संक्रमित, १८ यात्रु अझै भेटिएनन्
'कोरोना भाइरस'को खोप परीक्षण सफल भएको अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको दाबी
मिडियामार्फत कक्षा चलाउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी
कोरोना संक्रमण : फ्रान्स र स्पेनमागरि एकैदिन २३ सय बढीको मृत्यु
दुई मन्त्रीलाइ हिरासतमा राख्न अख्तियारमा उजुरी
न्युज पोर्टल ह्याक गरेको असगर अलीको कम्पनीद्वारा स्वीकार
हाइड्रो पावरको काम १० दिनदेखि ठप्प, कस्ताे छ कामदारकाे अबस्था ?
कोभिड १९: अमेरिकामा एकैदिन ९६८ को मृत्यु !